सील प्याक गरिएको खानेकुरा खानुहुन्छ ? खासगरी महिलाले यस्तो खतरनाक समस्या झेल्नु पर्छ - ज्ञानविज्ञान
खाना र निन्द्राको सम्बन्ध :
सुत्नमा कठिनाइँको समस्या देखिन्छ । न्यून कार्बोहाइडे«ड, भिटामिन डी, लाईकोफेनले पनि राम्रो निन्द्रा लाग्दैन । अर्कोतर्फ भिटामिन सी, क्याल्सियम र पानीको अभाव वा शरिरमा कोलेस्ट्रोल वा फ्याटको मात्रा बढी हुँदा जतिखेर पनि निद्रा लाग्ने गर्छ । अस्वस्थकर खानाले निन्द्रासँग सम्बन्धित अन्य समस्या ल्याउँछ ।
Don't Miss it तरिका पुर्याएर पानी पिउदा पनि तौल घट्छ जानिराखाैँ
Up Next के तपईलाई मुटुको रोग छ ? मुटु रोगीले कस्तो खाना खानुपर्दछ ? जानीराखौ